Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Beeniyay inuu Qabo Xanuunka Dhimirka.
Trump oo Beeniyay inuu Qabo Xanuunka Dhimirka.
Posted by ONA Admin	/ January 8, 2018
Donald Trump, Madaxwaynaha Maraykanka ayaa si xooggan u difaacay in uu caafimaad ahaan u qalmo in uu maamulo xafiiska uu ka taliyo, waxa uuna gaashaanka ku dhuftay buug dhawaan laga qoray oo isaga ku tilmaamaya in uusan maskax ahaan fadhiyin.
Shir jaraa’id oo uu qabtay ayuu Mr Trump ku tilmaamay qoraaga buuggaasi Michael Wolff in uu yahay nin musuq uu la dagay. Fariimo xidhiidh ah oo uu bartiisa Twitterka soo dhigay ayuu Madaxweynaha waxa uu ku sheegay in labada shay ee uu hibada u leeyahay ay tahay degannaanshaha maskaxdiisa iyo in uu yahay nin caqli badan.
Hadallada Mr Trump ee buuggaasi ayaa waxa ay qariyeen shir uu ku qabtay Camp David oo looga xaajoonayay siyaasadihiisa sanadka soo socda. Buugga Fire and Fury ayaa durbadiiba noqday buug si weyn loo iibsaday kaddib markii Jimcihii la soo bandhigay.